Mandray Fepetra Hanakanana Ny Fandotoan’ny Zavo-tsetroka Ny Mpanjifa sy ny Mpikatroka Ao Singapaoro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2015 5:21 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Français, русский, English
Tanora mpilatsaka an-tsitrapo vonona hiaro ny tontolo iainana tsy misy zavo-tsetroka. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Hetsi-bahoaka Manatsahatra ny Zavon-tsetroka.
Satria mitohy miely manerana ny Azia Atsimo Atsinanana ny loton'ny zavon-tsetroka avy amin'ny fandoroana ala, nampanantena ireo mpanjifa sasany ao Singapaoro fa vonona tsy hanohana intsony ireo orinasa tafiditra amin'ny famokarana ara-pambolena tsy maharitra. Nilaza ireo mpanjifa fa tsy hividy na hampiasa ireo vokatra avy amin'ny orinasa mpamokatra menaka voanio izay mahatonga ny fandripahana ala ao amin'ny faritra.
Nanjary olana isan-taona ao Singapaoro, Malezia sy Indonezia ny zavo-tsetroka manavatsava sisintany noho ny hain-tany sy ny doro tanety maharitra. Noho ny “tavy” fanaon'ny mpamboly sy ny hetsika fambolena mena-boanio amin'ny tany midadasika ao Indonezia no anton'izany. Saingy ankoatra an'i Indonezia, ifampizaran'i Malezia sy Singapaoro ihany koa ny andraikitra hampitsahatra ny fandoroana ala, satria mamatsy vola ny famokarana menaka voanio ao amin'ny faritra ireo orinasa voasoratra anarana ao amin'ireo firenena ireo.
Mangataka amin'ny mpanjifa mba tsy hividy vokatra mandray anjara amin'ny fandotoan'na zavona ny hetsika natomboky ny vondrona “maitso” ho an'ny tontolo iainana:
Amin'ny maha-mpanjifa, afaka mandray anjara amin'ny ady iombonana amin'ny fandotoan'ny zavo-tsetroka isika amin'ny alalan'ny fanjifana mahay misafidy sy tompon'andraikitra. Ny zavo-tsetroka dia avy amin'ny setroka misy poizin'ny afo miparitaka ao amin'ny ala sy ny tany mando ao Azia Atsimo-Atsinanana, ripaka noho ny fandrosoan'ny fambolena. Ohatra, mamatsy ny ankamaroan'ny mena-boanio manerantany ny toeram-pambolenay ao amin'ny faritra, zavatra fototra ilaina amin'ny sakafo sy ny fanadiovana tarehy. Afaka manova zavatra amin'ny alalan'ny fanohanana vokatra izay manana fototra maharitra ny mpanjifa.
Nitanisa zavatra dimy azon'ny mpanjifa atao hampihenana ny fandotoan'ny zavo-tsetroka ny Hetsi-bahoaka Manatsahatra ny Zavo-tsetroka :
1. Ahena ny fihinanana menaka fihinana
2. Ahena ny fampiasana taratasy
3. Tohanana ny orinasa mampiasa mena-boanio maharitra
4. Tohanana ny orinasa mampiasa taratasy maharitra
5. Mandresy lahatra orinasa
Mandray anjara amin'ny fampianarana ny vahoaka momba ny fanjifana tsy manimba tontolo iainana ny hetsika. Izany ihany koa no tanjon'ny hetsika “Miaina Izay Vidinay Izahay” izay mampahatsiahy ireo mpanjifa fa afaka manery ireo orinasa izy ireo mba hampiasa vola amin'ny famokarana mena-boanio “tsy ilaina “zavo-setroka.
Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Hetsi-bahoaka Manohitra Ny Zavo-tsetroka.
Nampiroboroboina tao amin'ny media sosialy tamin'ny alalan'ny diezy #XtheHaze ihany koa ny hetsika fanairana ara-tontolo iainana.
@wwfsg #earthhour mandefa ho anao ny tsara indrindra amin'ny hetsika #xthehaze
Mampiseho GIF (sarimiaina) mandrisika ny mpanjifa mba hifidy vokatra fikojakojana tarehy tsy misy zavo-tsetroka ny sioka eto ambany
Ampitomboy ny fahavononana hampitsaharana ny zavo-tsetroka. Takio ny vokatra tsy nilaina zavo-tsetroka
Manasongadina ny fiantraikan'ny fandotoan'ny zavo-setroka eo amin'ny olom-pirenena tsotra ity lahatsary dokambarotra ity.
Niharatsy ny zavo-tsetroka tamin'ny herinandro lasa, izay nanery ireo sekoly sy toeram-piasana maromaro hampiato ny asa ao Singapaoro. Tamin'ny famaliana ny fangatahana fandraisana fepetra mivaingana avy amin'ny governemanta, notondroin'ny minisitry ny tontolo iainana sy ny Famatsiana Rano, Vivian Balakrishnan ireo orinasa ahiahiana ho tafiditra amin'ny doro ala ary nandidy azy ireo avy hatrany mba hamaha ny olana.
Koa dia manantena ireo orinasa mba ho mangarahara kokoa amin'ny famokarana izahay, indrindra indrindra ireo tafiditra amin'ny sehatry ny mena-boanio sy ny ala. Farany, tsy maintsy mahafantatra ireo orinasa voarohirohy fa misy vidiny ny fanimbana ny fahasalamana, ny tontolo iainana sy ny toe-karenay.
Tamin'ny fanoratana tamin'ireo tranokalam-baovao hafa The Online Citizen, nandrisika ny governemanta Singaporeana i Terry Xu mba hiara-hiasa akaiky amin'ny fikambanana tsy miankina Indoneziana sy ireo mponina mba hanakanana ny fihanaky ny doro ala.
Ny mety azon'ny governemantan'i Singapaoro atao dia ny mampandray anjara ireo fikambanana tsy miankina ao Indonezia ary mamolavola drafitra fanaraha-maso ireo orinasa tsy tompon'andraikitra. Mety hanampy amin'ny fanomezana asa ho an'ny mponina vonona hiasa toy ny mpamono afo sy mpiambina ny toeram-pambolena ihany koa izany mba hisorohana ny afo na koa mijoro ho vavolombelona manoloana ireo orinasa mandika lalàna.